Rija Emadisson: tsiahivina an-tsary ny tantara | NewsMada
Rija Emadisson: tsiahivina an-tsary ny tantara
I Rija Emadisson, tovolahy tsy zovina intsony, indrindra ho an’ireo mpankafy saripika, saingy manan-java-baovao hatrany homena, ankafizin’ny rehetra. Izy indray no handravaka ny efitrano fampirantiana, etsy amin’ny Alliance française (AFT) etsy Andavamamba, manomboka ny 27 aogositra hatramin’ny 1 septambra izao.
« Victimes », izay azo adika koa hoe « Ireo niharam-boina ». Io ny lohatenin’ny fampirantiana hotanterahiny, mandritra io hadimiana io. Loza voajanahary, adilahy politika, izay nitarika korontana sy latsa-drà… Tsy vitsy ireo tranga efa nandravarava ity firenena ity, izay tsy tokony hohadinoina.
Hampahatsiahy izany indrindra i Rija Emadisson, amin’ny alalan’ireo sary samihafa, toy ny tamin’ilay fipoahana baomba, tetsy Mahamasina, nandritra ny fanamarihana ny fetim-pirenena, ny 26 jona 2016. Ho hita ao koa ny tantara an-tsarin’ireo niharam-boina, vokatry ny fandalovan’ny rivodoza Chedza sy i Fundi, ny taona 2015, sy i Enawo, tamin’ny volana marsa tamin’ny taon-dasa.
Teraka tany Antsirabe i Rija Emadisson. Taorian’ny fianarana teny amin’ny ambaratonga ambony, nifantoka tanteraka amin’ny fakana sary izy ary lasa asa fivelomany mihitsy izany. Anisan’ny mampiavaka azy amin’ny maro ny fahaizany mitantara amin’ny alalan’ny sary. Miisa 17 ireo sary arantiny ao anatin’ny « Victimes ».